Kana shamwari dzako dzepamwoyo dzichida kuti ubaye jekiseni ...
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Kana shamwari dzako dzepamwoyo dzichida kuti ubaye jekiseni…
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • dzidzo • Hurumende Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Kana shamwari dzako dzepamwoyo dzichida kuti ubaye jekiseni…
Vanhu vekuAmerican varasa shamwari pamusoro pekudzivirira kweCOVID-19
Kuvhota kwakaratidza kuti 97% yevakabayiwa vanhu vanoona shamwari dzavaimbove se "yakazara-inopesana nevanodzivirira" uye vakati havangamboita kuti vanzwisise kukosha kwekutora pfuti.
14% yevhakitiriya vekuAmerica vakamisa kushamwaridzana nevanhu vakasarudza kunze kwekudzivirira.
81% yevaongorori veDemocrat vakapindura vakati ivo vakabaiwa zvakakwana.
64% yevaongorori veRepublican vakapindura vakati vakabaiwa zvakakwana.
Ongororo nyowani yenyika yose, yakaitwa kutanga kwaGunyana, yakaratidza kuti 16% yevagari vemuUS vakatora chikamu muongororo vakapedza hushamwari hutatu mugore rapfuura nehafu. Vanenge gumi muzana (14%) vevanhu vekuAmerican vakabayiwa majekiseni vakati vakamisa hukama neshamwari dzakasarudza kusabaiwa nhomba ku COVID-19.
Vanhu vekuAmerican vanga vachirasa shamwari kubva kuhupenyu hwavo panguva yedambudziko re coronavirus, uye kune avo vakasarudza kukwikwidzwa, nzvimbo dzeshamwari pajekiseni re COVID-19 dzaiwanzove hukama-hwekutadza.
Muchokwadi, vakabayiwa majekiseni vakapindura vakapetwa kanokwana kana sevaya vasina tarisiro yekuwana jabs - 66% kusvika 17% - kuve vakapedza hushamwari panguva yedenda. Kuvhota kwakaratidza kuti 97% yevakabayiwa vanhu vanoona shamwari dzavaimbove se "yakazara-inopesana nevanodzivirira" uye vakati havangamboita kuti vanzwisise kukosha kwekutora pfuti.
COVID-19 kubaiwa ndiyo imwe yenyaya dzinokamuranisa kutyaira wedge pakati pevaAmerica. Ivo 14% vakadoma majabha sechikonzero chekugumisa hushamwari kana vachienzaniswa ne16% vakapomera misiyano yezvematongerwo enyika uye 15% avo vaimbova shamwari yavo vaifambidzana newaimbova mukadzi. Zvimwe zvikonzero zvaisanganisira kuwana shamwari dzavo vaive varevi venhema (7%) uye kuva neshamwari yekugadzira nyaya nezvavo (12%).
Hollywood sezviri pachena yakaropafadza zano rekurasa shamwari dzinoramba kubayiwa jekiseni. Actress Jennifer Aniston - zvinosetsa, nyeredzi yeterevhizheni 'Shamwari' - akadaro mwedzi wapfuura muInStyle bvunzurudzo yemagazini kuti akagumisa hukama nevanhu vakaramba kubatwa kana kusarudza kusamuudza chimiro chavo chekubata. "Zvinonyadzisa chaizvo," akadaro. "Ndangorasikirwa nevanhu vashoma pane yangu yemaitiro evhiki."
Mutevedzeri Jennifer Aniston
Iwo mwero wejekiseni vitriol yakawedzera mumavhiki apfuura. Nhepfenyuro nhepfenyuro Howard Stern nguva pfupi yadarika akapopota "ese ma * theads munyika medu asingazobayiwa majekiseni" uye akati avo vasina kuwana jabs vanofanira kunyimwa mibhedha yezvipatara kana vachirwara. "Gara kumba, ufire uko neCOVID yako," akadaro.
Radio nhepfenyuro Howard Stern
Nyowani akati 81% yevaongorori veDemocrat vakapindura vakabaiwa zvakakwana, zvichienzaniswa ne64% yeRepublicans uye 69% yevakazvimirira. About 57% yeRepublicans uye 41% yevaDemocrat vakati nzanga iri "yakanyanya kutsoropodza" yevasina kubayiwa vaAmerica.
Kushivirira kwekuzvidzivirira kwejekiseni kuri kuderera mu USA, seMutungamiri Joe Biden svondo rapfuura akaraira mabhizinesi ese ane zana kana vanopfuura vashandi kumanikidza vashandi vavo kuti vatore mabara. "Tave nemoyo murefu, asi kushivirira kwedu kwapera, uye kuramba kwako kwakatidhurira tese," akadaro Biden nezvevanhu vasina kubayiwa majekiseni ekuAmerica.